နယူးယောက်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
(နယူးယောက် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ထိပ်မှစ၍ လက်ျာရစ်: မန်ဟက်တန်မြို့လယ်၊ တိုင်းမ်စကွဲယား၊ ယူနီစဖီးယား၊ဘရွတ်ကလင်တံတား ၊ မန်ဟက်တန်အောက်ပိုင်း၊ ဝမ်း ဝေါလ်ထရိတ်စင်တာ၊ စင်ထရယ်ဥယျာဉ်၊ ကုလသမဂ္ဂ ဋ္ဌာနချုပ်၊ လစ်ဘာတီ ရုပ်တု
ပန်းသီးကြီး, ဂိုသမ်,စကြာဝဠာ၏ အလယ်ဗဟို, မအိပ်သောမြို့
နယူးယောက်ပြည်နယ် အတွင်း တည်နေရာ
ကိုဩဒိနိတ်: 40°43′N 74°0′W﻿ / ﻿40.717°N 74.000°W﻿ / 40.717; -74.000
ဘီလ် ဒီ ဘလာစီဒို (ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ)
၄၆၈.၉ စတုရန်းမိုင် (၁၂၁၄.၄ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၃၀၄.၈ စတုရန်းမိုင် (၇၈၉.၄ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၁၆၅.၆ စတုရန်းမိုင် (၄၂၈.၈ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၃၃၅၂.၆ စတုရန်းမိုင် (၈၆၈၃.၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၆၇၂၀ စတုရန်းမိုင် (၁၇၄၀၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၃၃ ပေ (၁၀ မီတာ)
လူဦးရေ (July 1, 2009)
၂၇၅၃၂/sq mi (၁၀၆၃၀/km၂)
၅၄၀၀/sq mi (၂၁၀၀/km၂)
၂၈၀၀/sq mi (၁၁၀၀/km၂)
နယူးယောက်စီးတီး သို့မဟုတ် နယူးယောက်ဟု ခေါ်ဆိုလေ့ ရှိကြသော နယူးယောက်မြို့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ လူဦးရေ အများဆုံး မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ခန့်မှန်းခြေ လူဦးရေ ၈,၃၉၈,၇၄၈ ဦး ရှိပြီး ကုန်းမြေဧရိယာ ၃၀၂.၆ စတုရန်းမိုင် (၇၈၄ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) ပေါ်တွင် နေထိုင်ကြသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ မြို့ကြီးများထဲမှ လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံး မြို့တစ်မြို့လည်း ဖြစ်သည်။  နယူးယောက်ပြည်နယ်၏ တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးတွင် တည်ရှိသော နယူးယောက်မြို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မြို့ပြဧရိယာအားဖြင့် အကြီးဆုံး မက်ထရိုပိုလစ်တန်ဒေသဖြစ်သော နယူးယောက် မက်ထရိုပိုလစ်တန်ဒေသ၏ ဗဟိုအချက်အခြာတွင် တည်ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံး မဂ္ဂါစီးတီးမြို့တော်ကြီးများတွင် တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မက်ထရိုပိုလစ်တန် စာရင်းအင်း ဒေသတွင် လူဦးရေ ၁၉,၉၇၉,၄၇၇ ဦး ရှိပြီး ပေါင်းစပ် မက်ထရိုပိုလစ်တန် စာရင်းအင်းဒေသတွင် လူဦးရေ ၂၂,၆၇၉,၉၄၈ ဦး ရှိသည်။ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ မြို့တော် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး  နယူးယောက်မြို့တော်အား ကမ္ဘာ၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ၊  ငွေကြေးဆိုင်ရာ  နှင့် မီဒီယာဆိုင်ရာ  မြို့တော် တစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပြီး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊  ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ သုတေသန၊ နည်းပညာ၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ အနုပညာ၊ ဖက်ရှင် နှင့် အားကစားတို့အပေါ်တွင် သိသာထင်ရှားသော ရိုက်ခတ်လွှမ်းမိုးမှု ရှိသော မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်သည်။ မြို့တော်အတွင်း လျှင်မြန်စွာ လှုပ်ရှား ပြုမှုနေကြခြင်းကြောင့်  နယူးယောက်မိနစ် ဆိုသော စကား ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။  ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ရုံးချုပ် တည်ရှိရာ မြို့ ဖြစ်သဖြင့်  နယူးယောက်မြို့သည် နိုင်ငံတကာ သံတမန်ရေးရာအတွက် အရေးပါသော နေရာဌာန တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးသော သဘာဝဆိပ်ကမ်း တစ်ခုပေါ်တွင် တည်ရှိသော  နယူးယောက်မြို့တွင် ဘားရာ ဟု ခေါ်သော ဒေသအပိုင်းအခြား ၅ ခု ပါဝင်ပြီး ထိုဒေသ ၅ ခုစလုံးသည် နယူးယောက်ပြည်နယ်၏ သီးခြား ကောင်တီတစ်ခုစီ ဖြစ်သည်။ ထိုဘားရာ ငါးခုမှာ ဘရောင့်စ်၊ ဘရွတ်ကလင်၊ မန်ဟတ်တန်၊ ကွင်းစ် နှင့် စတေတန်အိုင်းလန်း တို့ ဖြစ်ကြပြီး ၁၈၉၈ ခုနှစ်တွင် မြို့တစ်မြို့တည်း အဖြစ် စုစည်းခဲ့သည်။ မြို့တော် နှင့် ၎င်း၏ မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဒေသတို့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ တရားဝင် ဝင်ရောက်ရာ ထိပ်တန်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝင်ပေါက် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ နယူးယောက်မြို့တွင် ဘာသာစကား ၈၀၀ ကျော်ကို ပြောဆိုလျှက်ရှိကြ သဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘာသာစကားအားဖြင့် အကွဲပြားဆုံး မြို့တော်အဖြစ် တည်ရှိသည်။ နယူးယောက်မြို့တော်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပြင်ပတွင် မွေးဖွားသော လူ ၃.၂ သန်းကျော်တို့ နေထိုင်ရာမြို့ ဖြစ်သဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံခြားတွင် မွေးဖွားသူ အများဆုံး နေထိုင်ရာ မြို့တစ်မြို့လည်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် နယူးယောက် မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဒေသ၏ စုစုပေါင်း မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဂျီဒီပီမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁.၉ ထရီလီယံ မျှ ရှိသည်။ အကယ်၍ နယူးယောက်မြို့တော်သာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့မည် ဆိုပါက ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဂျီဒီပီအားဖြင့် ၁၂ ခုမြောက် အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ နယူးယောက်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မြို့တော်များတွင် ဘီလီယံနာ သူဌေး အများဆုံး မြို့ဖြစ်သည်။
နယူးယောက်မြို့၏ မူလအစကို ခြေရာခံကြည့်မည် ဆိုပါက ၁၆၄၂တွင် ဒတ်ချ်သမ္မတနိုင်ငံမှ ကိုလိုနီသမားတို့ မန်ဟတ်တန်အောက်ပိုင်းဒေသတွင် တည်ထောင်ခဲ့သော ကုန်သွယ်ရေး စခန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာအား ၁၆၂၆တွင် နယူးအမ်စတာဒမ်ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ .၁၆၆၄ တွင် မြို့တော်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတို့ အင်္ဂလိပ်တို့၏ ထိန်းချုပ်မှု အောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်ရှိ ဒုတိယမြောက် ချားလ်ဘုရင်မှ ၎င်း၏ ညီအစ်ကို တော်စပ်သူ ယောက်မြို့စားကြီး အား ပေးအပ်ရာမှ နယူးယောက်ဟု အမည် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။နယူးယောက်သည် ၁၇၈၅ မှ ၁၇၉၀ အထိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ မြို့တော် ဖြစ်ခဲ့သည်။  ၁၇၉၀ ခုနှစ်မှစ၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့အဖြစ် တည်ရှိခဲ့သည်။ ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်း နှင့် ၂၀ ရာစု အစောပိုင်းတို့တွင် အမေရိကန်သို့ သင်္ဘောဖြင့် ရောက်ရှိလာကြသည့် သန်းပေါင်းများစွာသော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအား လေဘာတီ ရုပ်တုမှ နှုတ်ခွန်းဆက်သခဲ့ပြီး။၎င်းသည် နိုင်ငံတကာအတွက် အမေရိကန်၏ သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်ရုံသာမက လွတ်လပ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၏ ပြယုဂ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။  ၂၁ရာစုတွင် နယူးယောက်သည်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု နှင့် စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှု၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ သည်းခံမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရေရှည်မျှော်ရည်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု တကမ္ဘာလုံး၏ ဆုံချက်တစ်ခု ဖြစ်ရုံသာမက လွတ်လပ်မှု နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ပေါင်းစုံ ကွဲပြားခြားနားနေမှု၏ ပြယုဂ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တကမ္ဘာလုံးရှိ မြို့ကြီးပေါင်း ၄၈မြို့မှ လူပေါင်း ၃၀,၀၀၀ တို့အား စစ်တမ်းကောက်ခံရာတွင် မြို့တော်၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ကွဲပြားခြားနားမှုများကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးကျယ် အခမ်းနားဆုံး မြို့အဖြစ် မဲပေး ရွေးချယ်ခြင်း ခံရသည်။
နယူးယောက်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်များနှင့် အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးများကို အပြင်လူများက ကောင်းစွာ သိရှိကြကာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား အများဆုံး သွားရောက်လည်ပတ်သော နေရာ ၁၀ ခုအနက် ၃ ခုသည် နယူးယောက်မြို့တွင် ရှိပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဦးရေ ၆၂.၈ သန်း လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။အချို့သူများက နယူးယောက်အား ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဓာတ်ပုံအများဆုံး ရိုက်ကူးရာ နေရာ အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ကြသည်။ ကမ္ဘာ၏ နှလုံးသားဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသော တိုင်းမ်စကွဲယား နှင့်  ၎င်းနှင့် လမ်းဆုံရာတွင် ရှိသော  မီးများ ထိန်ထိန်ညီးအောင် ထွန်းညှိထားသော ဘရော့ဒ်ဝေး ဇာတ်ရုံရပ်ကွက် တို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခြေလျှင်ခရီးသွား အများပြားဆုံး လူသွားလမ်းဆုံ တစ်ခု ဖြစ်ကာ ကမ္ဘာ့ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများ၏ အဓိက နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြို့တော်၏ အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦးများ၊ မိုးမျှော်တိုက်များ  နှင့် ပန်းခြံများ၏ အမည်များကို ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင် သိရှိကြသည်။ မန်ဟတ်တန်၏ အိမ်ခြံမြေဈေးသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဈေးအကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ နယူးယောက်သည် အာရှ၏ ပြင်ပတွင် တရုတ်လူမျိုးအများဆုံး နေထိုင်ရာ နေရာဖြစ်ပြီး မြို့အနှံ့တွင် တရုတ်တန်းအဖြစ် နေရာအများအပြားကို ဖော်ဆောင်လျှက် ရှိကြသည်။ ၂၄ နာရီ ၇ ရက် ဆက်တိုက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသော နယူးယောက် မြေအောက်ရထားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အော်ပရေတာ တစ်ဦးတည်းမှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသော အမြန်ရထားစနစ် ဖြစ်ပြီး ဘူတာရုံပေါင်း ၄၇၂ ခု ရှိသည်။နယူးယောက်မြို့တွင် ကောလိပ်နှင့် တက္ကသိုလ်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော် ရှိပြီး ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်များ အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် ထိပ်ဆုံး၌ ပါဝင်သော ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်၊ နယူးယောက်တက္ကသိုလ် နှင့် ရော့ခ်ဖဲလား တက္ကသိုလ်တို့ ပါဝင်သည်။ ဝေါလမ်းမှ ထိန်းချုပ်စုစည်းထားသော မန်ဟတ်တန်အောက်ပိုင်းရှိ ငွေကြေးရပ်ကွက်ကြောင့် နယူးယောက်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စီးပွားရေးအရ ဩဇာတိက္ကမ အကြီးမားဆုံး နှင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဦးဆောင်ဦးရွက် ငွေကြေးဌာန အဖြစ် ခေါ်ဝေါ်ကြကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် စုစုပေါင်း ဈေးကွက်ဝေစုအရ အကြီးဆုံးဖြစ်သော စတော့ခ်အိတ်ချိန်း နှစ်ခု ဖြစ်သည့် နယူးယောက် စတော့ခ် အိတ်ချိန်း နှင့် နတ်ဇ်ဒတ်ဇ် စတော့ခ်အိတ်ချိန်း တို့ သည်လည်း နယူးယောက်မြို့တွင် ရှိသည်။
၃ လူဦးရေ ပျံ့နှံ့နေထိုင်မှု
၅ ပညာရေး နှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ
၆ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်
၇ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ခေတ်ပြိုင် လူနေထိုင်မှုဘဝ
၁၀ အစိုးရ နှင့် နိုင်ငံရေး
၁၁ မှတ်သားလောက်စရာ ပြည်သူများ
ပညာရေး နှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ခေတ်ပြိုင် လူနေထိုင်မှုဘဝ[ပြင်ဆင်ရန်]
အစိုးရ နှင့် နိုင်ငံရေး[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ "New York City’s Population HitsaRecord 8.6 Million"။ March 22, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NYC Population: Current and Projected Populations။
↑ Stormwater Archived January 25, 2017, at the Wayback Machine., New York City Department of Environmental Protection. Accessed February 9, 2017. "These impervious surfaces cover approximately 72% of New York City's 305 square miles in land area and generateasignificant amount of stormwater."
↑ Mike Maciag (October 2, 2013)။ Mapping the Nation's Most Densely Populated Cities။ Governing – The States and Localities။ August 27, 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ August 27, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World Urban Areas။ Demographia (2018)။ March 27, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World's Largest Urban Areas [Ranked by Urban Area Population]။ Rhett Butler (2003–2006)။ April 26, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Largest Cities of the World – (by metro population)။ Woolwine-Moen Group d/b/a Graphic Maps။ April 26, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Annual Estimates of the Resident Population: April 1, 2010 to July 1, 2017 – Metropolitan Statistical Area; and for Puerto Rico – 2017 Population Estimates။ U.S. Census Bureau။ 13 February 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ March 24, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Annual Estimates of the Resident Population: April 1, 2010 to July 1, 2018 – Combined Statistical Area; and for Puerto Rico – 2017 Population Estimates။ U.S. Census Bureau။ April 27, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Global Power City Index 2009။ The Mori Memorial Foundation။ June 1, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ Will Gleason (March 11, 2019)။ Citing its diversity and culture, NYC was voted best city in the world in new global survey။ TimeOut။ May 19, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “After compiling the thoughts of over 30,000 people, both from our NYC readership and half-a-world away, New York was voted the greatest city on the planet for 2019. Inahint as to why this happened, and why now, it also lead the categories of most diverse metropolis and best culture.”
↑ Consulate General of Iceland New York Culture။ Consulate General of Iceland New York။ February 5, 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ July 1, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Consulate of Latvia in New York။ Consulate of Latvia။ February 8, 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ July 1, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Introduction to Chapter 14: New York City (NYC) Culture။ The Weissman Center for International Business Baruch College/CUNY 2011။ May 5, 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ July 1, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ New York, Culture Capital of the World, 1940–1965 / edited by Leonard Wallock ; essays by Dore Ashton ... [et al.]။ National Library of Australia။ 1988။ ISBN 978-0-8478-0990-5။ July 1, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Huw Jones။ "United States top, Britain second in financial activity: think-tank"၊ Thomson Reuters၊ September 4, 2018။ September 4, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "Think-tank New Financial's study, which focuses on the “raw” value of actual domestic and international financial activity like managing assets and issuing equity, underscored the overall dominance of New York as the world's top financial center."
↑ ၁၈.၀ ၁၈.၁ ၁၈.၂ Top 8 Cities by GDP: China vs. The U.S.။ Business Insider, Inc (July 31, 2011)။ July 1, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “For instance, Shanghai, the largest Chinese city with the highest economic production, andafast-growing global financial hub, is far from matching or surpassing New York, the largest city in the U.S. and the economic and financial super center of the world.”
New York City: The Financial Capital of the World။ Pando Logic (October 8, 2015)။ July 1, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Felix Richter (March 11, 2015)။ New York Is The World's Media Capital။ Statista။ July 1, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dawn Ennis (May 24, 2017)။ ABC will broadcast New York's pride parade live for the first time။ LGBTQ Nation။ September 26, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Never before has any TV station in the entertainment and news media capital of the world carried what organizer boast is the world's largest Pride parade live on TV.”
↑ Kelsy Chauvin (March 15, 2019)။ 15 Things NOT to Do in New York City။ Fodor's။ March 23, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “There are more than 8.6 million citizens of New York City, and they're pretty much all inahurry. They're also shrewd, outspoken, and proudly able to survive inametropolis that tends to punish the meek. The buzzing subway system alone isasymbol of how this city works: part ballet, part battlefield. Residents and visitors alike can see why New York is considered the greatest city in the world.”
↑ Poliak၊ Shira။ "Adjusting To New York City"။ November 1, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on December 3, 2015။ "Additionally, the fast-paced lifestyle of New York City demands adjusting."
↑ Stephen Miller (2016)။ Walking New York: Reflections of American Writers from Walt Whitman to Teju Cole။ pp. 46, 50, 131။ ISBN 978-0-8232-7425-3။ May 10, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dictionary – Full Definition of New York Minute'။ Merriam-Webster။ November 1, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Plan your visit Archived March 14, 2017, at the Wayback Machine., United Nations. Accessed February 9, 2017. "The Headquarters of the United Nations is located in New York City, along the East River. When you pass through the gates of the United Nations visitors' entrance, you enter an international territory. This 18-acre site does not belong to just one country, but to all countries that have joined the Organization; currently, the United Nations has 193 Member States."
↑ NYC Mayor's Office for International Affairs။ The City of New York။ June 16, 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 24, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Digital Diplomacy Coalition။ Digital Diplomacy Coalition, New York။ August 11, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Established in 2014, DDC New York has partnered with the United Nations, major tech and social media companies, multiple governments, and NGOs to bring unique programs to the area community.”
↑ New York City။ A&E Television Networks, LLC။ March 4, 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Port inaStorm: The Port of New York in World War II။ New York State Museum။ April 29, 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ August 5, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Boroughs of New York City။ Ben Cahoon (2002)။ February 11, 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ A 5-Borough Centennial Preface for Katharine Bement Davis Mini-History။ The New York City Department of Correction (1997)။ October 23, 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ October 26, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Supplemental Table 2. Persons Obtaining Lawful Permanent Resident Status by Leading Core Based Statistical Areas (CBSAs) of Residence and Region and Country of Birth: Fiscal Year 2014။ U.S. Department of Homeland Security။ August 4, 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 1, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Endangered Language Alliance (2012)။ September 7, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၄.၀ ၃၄.၁ "Linguistics – Say what?"၊ The Economist၊ September 10, 2011။ May 2, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kleinfield၊ N.R. (January 15, 2016)။ New Yorkers, Self-Assured and Opinionated, Defend Their Values။ The New York Times on MSN။ January 15, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Roberts၊ Sam။ "Listening to (and Saving) the World's Languages"၊ The New York Times၊ April 28, 2010။ April 29, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Turin၊ Mark (August 9, 2013)။ The World's Most Linguistically Diverse Location? New York City။ PopAnth။ May 2, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Place of Birth by Year of Entry by Citizenship Status for the Foreign-Born Population – Universe: Foreign-born population 2015 American Community Survey 1-Year Estimates New York City။ United States Census Bureau။ 13 February 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ April 16, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "More Foreign-Born Immigrants Live In NYC Than There Are People In Chicago"၊ The Huffington Post၊ December 19, 2013။ April 16, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ U.S. metro areas – ranked by Gross Metropolitan Product (GMP) 2019 | Statistic။ May 31, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ U.S. Metro Economies (note CSA 2012 GMP total includes sum of New York, Bridgeport, New Haven, Allentown, Trenton, Poughkeepsie, and Kingston MSA 2012 GMP values cited)9through 18 in Appendix Tables။ IHS Global Insight, The United States Conference of Mayors, and The Council on Metro Economies and the New American City (November 2013)။ March 5, 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 27, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Top 10 Billionaire Cities။ Weaalth-X (2018)။ May 16, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “New York was the world's top billionaire city in 2017, remaining the preferred location for those seekingaluxury blend of finance, culture, commerce, shopping and real estate. The city is home to more billionaires than almost every country in the world, with the exception of China, Germany and India.”
↑ ၄၃.၀ ၄၃.၁ United States History – History of New York City, New York။ September 9, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kingston: Discover 300 Years of New York History Dutch Colonies။ National Park Service, U.S. Department of the Interior။ May 10, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Nine Capitals of the United States။ United States Senate။ September 7, 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rank by Population of the 100 Largest Urban Places, Listed Alphabetically by State: 1790–1990။ U.S. Census Bureau (June 15, 1998)။ February 8, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Statue of Liberty။ A&E Television Networks, LLC။ May 21, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Statue of Liberty။ World Heritage။ UNESCO World Heritage Centre 1992–2011။ October 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Venture Investment – Regional Aggregate Data။ National Venture Capital Association and PricewaterhouseCoopers။ 8 April 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ April 22, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Matt Flegenheimer။ "Ted Cruz Deplores 'Liberal, Left-Wing Values' While Lobbying for New York Votes"၊ March 23, 2016။ April 22, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The Latest: China Hopes US Joins Climate Deal Quickly"၊ April 22, 2016။ April 22, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lisa Foderaro။ "TakingaCall for Climate Change to the Streets"၊ September 21, 2014။ April 22, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kristine Phillips။ "New York mayor on Germany trip: The world should know that Americans don't align with Trump"၊ July 8, 2017။ July 9, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shields၊ Ann (November 10, 2014)။ The World's 50 Most Visited Tourist Attractions – No. 3: Times Square, New York City – Annual Visitors: 50,000,000။ Travel+Leisure။ July 12, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “No.3Times Square,...No.4(tie) Central Park,...No. 10 Grand Central Terminal, New York City”
↑ Mayor De Blasio And NYC & Company Announce NYC Welcomed Record 62.8 Million Visitors In 2017။ NYC & Company, Inc (March 20, 2018)။ April 4, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The 10 Most Photographed Cities In The World။ The Crazy Tourist။ October 11, 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 28, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ O'Neill၊ Sean (June 12, 2011)။ The 25 most photographed places on Earth။ NBCNews.com။ January 17, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Remnick၊ Noah။ "New York Today:Transforming Times Square"၊ August 24, 2015။ August 25, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Times Square – The Official Site of Times Square။ Times Square District Management Association, Inc။ January 18, 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ August 25, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Times Square။ Encyclopædia Britannica။ May 10, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World's Most-Visited Tourist Attractions No. 3: Times Square, New York City။ Travel and Leisure။ October 15, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Most Jivin' Streetscapes in the World။ Luigi Di Serio (2010)။ September 21, 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 10, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ New York Architecture Images- Midtown Times Square။ 2011 nyc-architecture။ January 25, 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 10, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Manhattan, New York – Some of the Most Expensive Real Estate in the World Overlooks Central Park။ The Pinnacle List။ 29 November 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ November 24, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Brennan၊ Morgan (March 22, 2013)။ The World's Most Expensive Billionaire Cities။ Forbes။ July 6, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vivian Yee။ "Indictment of New York Officer Divides Chinese-Americans"၊ February 22, 2015။ May 5, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chinese New Year 2012 in Flushing။ QueensBuzz.com (January 25, 2012)။ May 5, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NYC – The Official Guide။ NYC & Company (January 23, 2017)။ May 5, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Plenty of cities haveaChinatown, but New York City—home to the largest Chinese populations in the United States—has more than you can count on one hand.”
↑ Waxman၊ Sarah။ The History of New York's Chinatown။ Mediabridge Infosystems, Inc.။ May 5, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Manhattan's Chinatown, the largest Chinatown in the United States and the site of the largest concentration of Chinese in the Western Hemisphere, is located on the Lower East Side.”
↑ Chinatown New York City Fact Sheet။ explorechinatown.com။ May 5, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Chinatown New York City is the biggest in the United States, with the largest concentration of Chinese in the Western Hemisphere.”
↑ "With Terrorism Concerns in Mind, Police Prepare to GuardaShuttered System"၊ The New York Times၊ December 20, 2005။ February 17, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ How to Ride the Subway။ mta.info။ April 21, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 25 Most Extensive Metro Systems in the World။ list25.com။
↑ NYC Subway 101။ Walks of New York။
↑ Academic Ranking of World Universities 2017။ ShanghaiRanking Consultancy။ October 16, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CWUR 2016 – World University Rankings။ Center for World University Rankings။ October 16, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Meaney၊ Thomas (February 12, 2016)။ Michael Bloomberg's One Percent Foreign-Policy Doctrine။ FP။ February 12, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Florida၊ Richard (March 3, 2015)။ Sorry, London: New York Is the World's Most Economically Powerful City။ The Atlantic Monthly Group။ March 16, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Our new ranking puts the Big Apple firmly on top.”
↑  Accessed March 23, 2019.
↑ NYSE Listings Directory။ June 21, 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 23, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2013 WFE Market Highlights။ World Federation of Exchanges။ March 27, 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ July 20, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နယူးယောက်မြို့&oldid=623845" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၆:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။